Black and Blue (2019) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 6.1/10 6245 votes
နယူးအျောလနျရဲ့ ရဲတပျဖှဲ့မှ အမြိုးသမီးရဲမလေူသဈလေး အလီရှာဟာမူးယဈတိုကျဖကျြအဖှဲ့တဈဖှဲ့က မူးယဈဆေးရောငျးသူတှကေို အသပေဈသတျနတေဲ့ဗီဒီယိုကို သူ့ကိုယျပျေါမှာတပျဆငျထားတဲ့ ကငျမရာမှတဈဆငျ့ ရိုကျကူးထားမိတယျ…လူသတျမှုကို ကြူးလှနျတဲ့ လူသတျသမားဟာ လာဘျစားမှုကို ကြူးလှနျနတေဲ့
မယျလှနျးဟုချေါသောရဲနှငျ့ သူတို့အဖှဲ့ဖွဈတာကိုသိလိုကျရတော့သူ့မအသကျဘေးက လှတျအောငျ သူမကိုကူညီမယျ့ သူ့ငယျသူငယျခငျြးရဲ့ အဈကိုဝမျးကှဲရဲ့ အကူအညီကို ရခဲ့ပါတယျ…အသတျခံရတဲ့ဆေးရောငျးတဲ့ ဇီးရိုးဆိုသူမှာ ကငျးစတနျးအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ ဒဲရီးယကျဈရဲ့ တူသားတျောသူဖွဈနလေို့မယျလှနျးရဲ့စကားကို နားယောငျကာ အလီရှာနောကျကို ဒဲရီးယကျဈကလိုကျ မယျလှနျးက လိုကျနှငျ့ အသကျဘေးကလှတျအောငျ ဘယျလိုတှရှေောငျတိမျးကွမလဲ…သူ့ဆီမှာရှိတဲ့အမှနျတရားကိုရိုကျမိထားတဲ့ ကငျမရာကိုရော စခနျးရောကျအောငျဘယျလိုပို့ပေးမလဲဆိုတာကို ဇာတျလမျးလေးကွညျ့ရငျး စီးမြောကွတာပေါ့နျော…လှုပျလှုပျရှားရှား ကွိုကျနှဈသကျသူတှအေတှကျ လကျလှတျမခံသငျ့တဲ့ IMDb 5.9 ရှိတဲ့ ဇာတျကားကောငျးလေးဖွဈပါတယျ….
နယူးအော်လန်ရဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အမျိုးသမီးရဲမေလူသစ်လေး အလီရှာဟာမူးယစ်တိုက်ဖျက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က မူးယစ်ဆေးရောင်းသူတွေကို အသေပစ်သတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုကို သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ကင်မရာမှတစ်ဆင့် ရိုက်ကူးထားမိတယ်…လူသတ်မှုကို ကျူးလွန်တဲ့ လူသတ်သမားဟာ လာဘ်စားမှုကို ကျူးလွန်နေတဲ့
မယ်လွန်းဟုခေါ်သောရဲနှင့် သူတို့အဖွဲ့ဖြစ်တာကိုသိလိုက်ရတော့သူ့မအသက်ဘေးက လွတ်အောင် သူမကိုကူညီမယ့် သူ့ငယ်သူငယ်ချင်းရဲ့ အစ်ကိုဝမ်းကွဲရဲ့ အကူအညီကို ရခဲ့ပါတယ်…အသတ်ခံရတဲ့ဆေးရောင်းတဲ့ ဇီးရိုးဆိုသူမှာ ကင်းစတန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒဲရီးယက်စ်ရဲ့ တူသားတော်သူဖြစ်နေလို့မယ်လွန်းရဲ့စကားကို နားယောင်ကာ အလီရှာနောက်ကို ဒဲရီးယက်စ်ကလိုက် မယ်လွန်းက လိုက်နှင့် အသက်ဘေးကလွတ်အောင် ဘယ်လိုတွေရှောင်တိမ်းကြမလဲ…သူ့ဆီမှာရှိတဲ့အမှန်တရားကိုရိုက်မိထားတဲ့ ကင်မရာကိုရော စခန်းရောက်အောင်ဘယ်လိုပို့ပေးမလဲဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းလေးကြည့်ရင်း စီးမျောကြတာပေါ့နော်…လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ IMDb 5.9 ရှိတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်….
Option2megaup.net 512 MB SD (480p)
Option3datbu.com 512 MB SD (480p)
Option4uptomega.com 512 MB SD (480p)
Option5yuudrive.me 512 MB SD (480p)
Option6sharer.pw 512 MB SD (480p)
Option 13 storage.msubmovie.com 3.5 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 14 megaup.net 3.5 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 15 datbu.com 3.5 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 16 sharer.pw 3.5 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 17 yuudrive.me 3.5 GB FHD DTS-HDMA 5.1